Gmail Hacking is 100% work or not? And Gmail passwords are 100% safe or not? | Shwekoyantaw
Gmail Hacking is 100% work or not? And Gmail passwords are 100% safe or not?
Published : 11:30 PM Author : shwekoyantaw
ဒီပိုစ့်သည် Tutorial လဲမဟုတ်ပါ ဆောင်းပါသက်သက်လဲမဟုတ်ပါ...။
Gmail passwords are 100% safe or not?
Gmail နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ယုံတမ်းပုံပြင်တွေကော...တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကောအမျိုးမျိုး မှန်သမျှကျွန်တော် ကြားဘူးပါတယ်....။Gmail နဲ့ ပတ်သက်ပြီတော့ ဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ရမလဲ ဘယ်လိုများ Attacking လုပ်ရမလဲတွေကော အမျိုးမျိုးပါပဲ........။
Gmail နဲ့ ပတ်သက်ပြီတော့ ဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ ပို့စ်တွေကိုအများကြီးဖတ်ဘူးပါတယ်
သူတို့သိသလောက်ရေးထားပေမယ့်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသလို တစ်ချို့ ပိုစ့်တွေလဲ တော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်.......။ဒါပေမယ့် သင့် Gmail Password ကကော 100% လုံခြုံရဲ့လား လုံခြုံအောင်ဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ.........။Hacker တွေကသင့် Gmail password ကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်တတ်သလဲ ........ဒါတွေကိုကော သင်လေ့လာဘူးပါလား........။
Gmail Hacking is 100% work or not?
သင်သည် Gmail Account တစ်ခုကို hacking လုပ်ဖို့ လွယ်ပါ့မလား......Gamil account name တစ်ခုရ
ရုံနဲ့ အဲဒီ Gmail ကိုတိုက်ခိုက်လို့ရမလား.....လို့တွေးဘူးပါသလား။ တခြား နည်းတွေ phishing စတဲ့ နည်း တွေကကော အသုံးဝင်ပါသလား.......။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံအရ online ပေါ်မှာ gmail hacking tutorial တွေကော gmail hacking tools တွေကောအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်...။တစ်ချို့ဟာတွေအဆင်ပြေသလိုလိမ်ညာမှုတွေအများကြီးကြုံ ဘူးခဲ့ပါတယ်.........။တချို့ tool တွေဆိုရင် account နာမည်သိရုံနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ ရေးသာထားကြ ပါတယ်.....။အဲဒါတွေကော တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားး........။
Gmail သည် 100% လုံခြုံသော online base mail ဆားဗစ်ဖြစ်ပါသည်။...ဟုတ်တယ်လေဒါလောက်မှ မလုံခြုံဘူးဆို google နာမည်ပျက်ရုံ ရှိမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်ကော ဘာလို့ Gmail.Gtalk အကောင့်တွေ Hack ခံရသလဲ မေးကြပါလိမ့်မယ်........။ခိုးခံရတယ် ဆိုတာ သင်တို့ရဲ့ Low level အတွေ့အကြုံ၊ အသိညဏ် ၊
အတွေးအခေါ် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်.....။တစ်ခါတစ် internet ဆိုင်တွေမှဆိုရင် ဇော်ဂျီ ဖောင့်နဲ့ password ရိုက်နေပြီး အကောင့်ခိုးခံရတယ်လို့ ထထအော်တာခဏတိုင်းကြုံ ဘူးပါတယ်.....။အဲ လက်စသပ်ပြောရရင် တော့ Gmail အကောင့်သည် ၁၀၀% လုံခြုံပါသည် ၁၀၀%လည်း Hacking လုပ်နိုင် ပါသည်......သင်အသုံးအကျရင်ပေါ့.....။သင်နည်းနည်းအတွေ့ကြုံနည်းတယ်ဆိုရင် အောက်ကဆောင်းပါတွေ ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်.....။Gmail အကောင့်ပါသွားသူများလဲ အတွေအကြုံ ကောင်းတွေရရန် ဆက်ဖတ်နိုင်ပါသည်.......။Gmail အကောင့်ပါသွားသူများ ဒီပိုစ့်ကို အဆုံးထိဖတ်ပြီး သင်တို့ဘယ်လောက် မှာခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာ သင့်တို့ကိုသင်တို့ ပြန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်........။
Methods of Gmail hacking
ဒီ Method အတိုက်ခံရသူများ သည်...password ရွေချယ်မှုညံ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.....။ဒီ Method တွင်အောက်ပါ အတိုင်းခွဲခြားလေ့လာနိုင်ပါသည်......။
(1) Dictionary Attack
ရှင်းပါတယ် password တွေကို Dictionary အတိုင်းတိုက်စစ်တာပါ။ Dictionaryထဲမှပါတဲ့ စကားစုတွေကို
သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင်သည် တကယ့်အညံ့ဆုံး password ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်..ဥပမာ "vampire"
တို့လိုစကာလုံးမျိုးကိုအသုံးပြုသူတွေဆိုပါတော့..။တအားကိုညံ့လွန်းပါတယ်....။ခဏလေးနဲ့ passwords cracking လုပ်နိုင်ကြပါတယ်..........။
(2) Number Crack
ဒီနည်းက ကန့်သက်ချက်ရှိပါတယ်..။ဥပမာ သင့်သားကောင်ရဲ့ account password က နံပါတ်တွေနဲ့သာပေးထားရင်တော့ .သင့်အတွက်ရွှေပါပဲ......။account password တွေက နံပါတ်တွေဖြစ် ပြီး4လုံးကနေ 8 လုံးအတွင်းဖြစ်ပါက အရမ်းကိုလွယ်ကူသော password ဖြစ်ပါတယ်....။
အရမ်းလဲအားနည်းပါတယ်.........။ဒါကြောင့် password တွေကို နံပါတ်တွေကြီးမထားသင့်ပါဘူး.....။အရမ်း အရမ်းကို အားနည်းပါတယ်.......။
Password cracking method ထဲမှာလူသုံးအများဆုံးနဲ့ ကျွန်တော်စိတ်မရှည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်....။အကောင်း ဆုံးပေမယ့် ဒီနည်းက password တွေကို တစ်ကြောင်းခြင်း တိုက်စစ်တာဖြစ်လို့ အချိန်ပေးရသလို dictionary words တွေနဲ့ Number တွေပေါင်းထားတဲ့ password တွေကို အသာလေး cracking လုပ် နိုင် ပါတယ်.....။ ဥပမာ vampire2006 လိုဟာမျိုးပေါ့...။ဒီ Method လိုအပ်သလဲလိုရင် Word list တွေနဲ့ brute-force cracking tool လိုအပ်ပါတယ်.....။ဒီနေရာမှာ Word list ဆိုတာကိုရှင်းပြမှရ မှာပါ......။
Word list ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ password ကိုတစ်ကြောင်းခြင်းတိုက် စစ်ဖို့ စာလုံးတွေကိုစုစောင်းထားတဲ့ ဖိုင်လေးပါ....။ .txt ဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်......။ကျွန်တော့်ဆီမှာ 1.5million word list တွေရှိပါတယ်...။အဲဒါ ကို ဒီမှာသွားဖတ်နိုင်ပါတယ်.......။http://www.shweko.co.cc/2011/12/15million-word-list.html
brute-force cracking နဲ့ပတ်သက်ပြီသိချင်သေးတယ်ဆိုရင်လဲ ဒီမှာ သွားဖတ်နိုင်သေးပါတယ်...။ tool တွေကောရှိပါတယ်.....လိုချင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်.......။
အားကောင်းသော password ဖြစ်ရန် မှတ်ရခတ်လောက်အောင်.....အရှည်ကြီးလဲမလိုပါ...အနည်းဆုံး 8 လုံးထားသင့်ပါတယ်......။upper case တွေ၊ စာလုံးအကြီးတွေ ၊ နံပါတ်တွေ သာမန်စကာလုံးတွေကို ရော
ညှပ်သုံးပါ.......။ဥပမာ Mm@ttAck3& ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ ......။ဒီလိုမျိုးဆိုရင် ဘယ် Brute Force attack မှ မတိုက်နိုင်ပါဘူး......တိုက်လဲ အိုသေတော့မှရပါလိမ့်မယ်.......။ဟုတ်တယ်လေ တစ်လုံးချင်း တစ်ကြောင်း ချင်းတိုက်စစ် တာပဲ ဒါမျိုးစကားစုဆိုတာ အတော်ရှား ပါတယ်....။wrod list ကို ဘီလီယံ ချီပြီးတော့ရှိမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်....။ပိုပြီလုံချင်ရင် password ကိုတစ်ပတ်တစ်ခါမပြောင်းနိုင်တောင်မှ တစ်လတစ်ခါ ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်........။သင့် password ကဘယ်လောက်လုံချုံသလဲဆိုတာ..ဆိုက်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်ကလင့်ကိုသွားလိုက်ပါ။
အောက်မှာကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတာပါ။ 100% ရအောင်လုပ်ပါ။သူကဘာတွေလိုအပ်သလဲဆိုတာပါ
For Attacker : အားနည်းတဲ့ password ဆိုရင် 80% လောက် Attack ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
For User : အားနည်းတဲ့ password ဆိုရင် သေခြာပေါက် crack ခံရမှဖြစ်ပါတယ်.....။
နောက် Method တစ်ခုပြောင်းကြည့်ရအောင်....။
Phishing ဆိုတာ web စာမျက်နှာအတုဖြစ်ပါတယ်...Gmail စာမျက်နှာဆိုရင် လဲ တကယ့် Gmail စာမျက် နှာနဲ့ ပုံစံတူဖြစ်ပြီး.....ကိုယ်က Gmail အစစ်ထင်ကာဝင်ရောက်လိုက်သူတွေအတွက် user name တွေ password တွေ ကို attacker ရဲ့ hosting base ကိုရောက်ရှိသွားတာပါ...။များသောအာဖြင့်
Phishing မှာ ဖိုင်သုံးဖိုင်ပါဝင်ပြီး ပုံစံတူ စာမျက်နှာအတုဖိုင် (html ဖိုင်)၊ ပြီးရင် user name တွေ password တွေလက်ခံဖို့ (txt) ဖိုင်တစ်ခု၊ အဲဒီလို user name တွေ password တွေ (txt) ဖိုင်ထဲေ၇ာက် ဖို့လို့ ညွန်ကြားမယ့်....web base programing ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ (php) ဖိုင်တစ်ခု အားလုံးပေါင်း (၃)ခုပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တစ်ခါက ကိုယ့်နိုင်ငံ က social network ဆိုဒ် တစ်ခုမှာ Phishing အကြောင်းရေးဘူးပါတယ်..။ ဘယ်လိုအပြောခံရသလဲ ဆိုရင် phishing ဆိုတာကလေးကလား နည်းတစ်ခုပဲတဲ့ .....ပြောချက်ကရင်နင့် စရာပါ....။ကျွန်တော်လဲ စောက်မြင်ကတ်ကတ် နဲ့ php source ကိုချပြပြီပေါ့ သူ့ကို ကလေးကလားဆိုရင် ဒါလေးကို ရှင်းပြပေးပါလားလို့ ပြောတော့ အဲဒီငနာက အတီးအတ ဖြစ်သွားတယ်......။ဟုတ်တယ်လေ သူတို့သိတဲ့ phishing ဆိုတာဖိုင်တွေကို ဒေါင်လုပ်ချ ပြီး
ရင် Hosting ပေါ်တင်ပြီသုံးကြမယ်ပေါ့....ဒါပါပဲ...ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲလိုဆိုသိတဲ့သူရှားပါတယ်.....။
Phishing က ကလေးကလားဆိုရင် Paypal စာမျက်နှာလေးကိုပဲတူအောင်လုပ်ကြည့်။phising ဆိုတာ ကလေးကလားဆိုပြီး တချို့ ကပြောချင်ကြတယ်.. အမှန်တကယ် သူလည်းသူ့ ပညာနဲ့ သူပါပဲ ... တချို့ ဆို gmail, facebook တင်မကဘူးး ... paypal, visa, libertyreserve စတဲ့ online money transfer နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ဆိုကဒ်အတုတွေတောင် လုပ်ကြပါတယ်.. တချို့ ကလည်အးလွယ်ပြောတယ်.. phising ဆိုတာလွယ်ပါတယ်တဲ့ index page မှာ source code ကို ဖွင့် link ပေးတဲ့နေရာမှာ နေရာလွဲပြီးတော့ ကိုယ့် hosting မှာ .txt ဖိုင်တခုနဲ့ သိမ်းလို့ ရရင်ပြီးရောပေါ့တဲ့ ... ကဲ .. အခု ... libertyreserve ဆိုက်ဒ်ကို လုပ်ကြည့်ပါ အဲ့လိုရရင် တစ်သန်းကြေးတောင် လောင်းလိုက်ချင်သေး ( နီကိုရဲ စတိုင် ) liberty reserve မှာဆို ကိုယ့်အကောင့်ထဲရောက်ဖို့pincode ပါဖြည့်ရပါတယ် ... login page ပြီး၇င် pincode page ရောက်သွားပါရောလား .. ဒါတောင် သူတို့ က keylogger ရန်ကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့pincode ကို OSK ( on screen keyboard ) လိုမျိုး click ထောက်ပြီးဖြည့်ခိုငိးတာပါ... ကဲ ခင်ဗျား လွယ်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ phising အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ............။ကမ္ဘာပေါ်မှာ Bank အကောင့်တွေ တခြား online shopping ကောင့်တွေအများဆုံးအခိုးခံရတာ ဒီ Phishing နည်း ခုက္ခပေးတာပါပဲ.....။
ကျွန်တော်ရေးသာထားတဲ့ Phishing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုစ်တွေကို ဖတ်ချင်သေးရင်ဒီလင့်လေးက သွားဖတ်လိုက်ပါ........။
Gmail phishing page ကို online ပေါ်မှာနဲ့ local network area မှာကော အသုံးပြုကြပါတယ်....။
local network area or internet cafe တွေမှာဆိုရင် Browser(ဥပမာ mozilla firefox) တွေရဲ့Home
page မှာ Gmail phishing page ကိုတင်ထားခဲ့ကြပါတယ်....။online ပေါ်မှာကတော့ social Engineering ကို အသုံးပြုရတာဖြစ်ပြီး .ဥပမာသင့်မေးထဲကို " မင်းအကောင့်ကိုငါဟက်ပြီးပြီ မယုံရင် ပြန် ကြည့်ဆိုပြီး "သူ့ Gmail phishing page ကိုလင့်ပေးတာမျိုးပေါ့...။တစ်ခါတစ်ရံ နာမည်ကြီးတဲ့ "social network ဆိုက်တွေမှာ gmail ကနေ ဆက်သွယ် ချင်ရင်" ဆိုပြီးတော့သူ့ Gmail phishing pageကို လင့် ပေးထားတတ်ကြပါတယ်....။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲလုပ်လုပ် Gmail phishing page address က ဘယ်လိုမှ http://mail.google.com မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ mail.google.comဆိုတဲ့ Domain Name ဘယ်လိုမှ အတုလုပ် လို့ မရပါ......။ဆင်တူတာတွေတော့လုပ်လိုရပါတယ်....။ဥပမာ mialgoogle.co တို့ဘာတို့ပေါ့...။တစ်ခါ
တစ်လေ ဗရုတ်သုတ်ခ domain တွေတောင်ရှိသေးတယ်..../ ဥပမာ ။ ။jellket.36nnet.com ဆိုတာမျိုး တွေပေါ့.......။တစ်ခါတစ်လေ google url shorter ကိုသုံးပြီး လင့်ကို ပုံပြောင်းထားတတ်ကြပါ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Gmail သုံးမယ်ဆိုရင် address ဘားကို အရင်ကြည့်ပါ.....။ Gmail address မဟုတ်ရင်
မ၀င်ပါနဲ့.....။ သေချာအောင် Gmail သုံးမယ်ဆိုရင် mail.google.com ဆိုပြီးကိုယ်တိုင် ရိုက်ပြီး အသုံးပြု ပါ.....။သူများပေးသောလင့်များ...ကိုယ်ထိုင်သောစက်မှာအော်တို ပေါ်လာသော Gmail page များကိုသေချာ address bar ကိုသေခြာ ကြည့်ရှုလေ့လာပြီမှာသုံးပါ...။
For Attacker : မိမိ Phishing Page ကို မိမိသားကောင်အနေနှင့်သေခြာပေါက် အသုံးပြုခဲ့လျှင် 100% အကျိုးပြုပါသည်...။အာနည်းချက်မှာ URL ကိုကြည့်ရုံနဲ့ အရမ်းသိသာပါသည်......။
For User : internet အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ Gmail မှာမဟုတ်ပါဘူး ../ မိမိ အသုံးပြုသောဆိုက်မှန် သမျှကို
ဆိုက် Address အမြဲ တမ်းစစ်ပါ.....။ဒါလေးမှ စစ်ဖိုမေ့နေလျှင် အကောင့်ပါသွားတာသင့်ပြစ် 100% ပါဝင်ပါသည်......။ဒီ Method ကိုကာကွယ်ရန် အနည်းငယ်မျှသော အတွေ့အကြုံ သာလိုပါသည်...။
Keylogger ဆိုတာဟာ Keyboard မှရိုက်သော password များ...စကာလုံးများ မှတ်သာပေးသော tool ဖြစ်ပါသည်...။တစ်ချို့ ဆိုလျှင် မိမိဝင်ကြည့်သော web page များအပြင် မိမိ အသုံးပြုနေစဉ် screen shots ပါရိုက်ပေးထားတတ်ပါသည်...။နောက်ပြီး တစ်ချို့ဆိုလျှင်.....မိနစ် အပိုင်းအခြားအလိုက် Attacker တွေဆီကို report ပြန်ပေးတတ်ကြပါသေးသည်......။
Deepfreeze လိုဆော့ဝဲမျိုးကို အသုံးပြုပါ....။အသုံးပြုပြီ စက်ပိတ်လိုက်လျှင် keylogger မှမှတ်ထားသမျှ ပျောက်ကုန်မည်.....။နောက်ပြီး window os တွင်ပါဝင်သော screen keyboard ကိုသုံးပါ..။manual keyboard မဟုတ်သောကြောင့် မိမိ password များကိုမှတ်သာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ...။
screen keyboard အသုံးပြုရန် start>>Accessories>>Accessibility>>On-screen keyboard လို့
သွားပြီးအသုံးပြုပါ.....။ Intetnet cafe များတွင် ပိုပြီးသတိထားပါ......။
တစ်ခါတစ်လေမိမိ အမှာများကြောင့် password များကျန်နေခဲ့တတ်ကြပါသည်..။တစ်ချို့ကလည်းသေချာ ကျန်အောင်လုပ်ထားတတ်ကြပါသည်.....။ထိုကဲ့သိုကျန်နေခဲ့လျှင် ...... password အမဲလုံးလေးများကို password viewer များအသုံးပြုပြီးတော့ စကာလုံးများ အဖြစ် ဖေါ်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.......။အောက်က
Gtalk ပဲသုံးသုံး Gmail ကိုပဲ သုံးသုံး remember password ဆိုတာလေးကို အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပါ....။
internet cafe တွေမှာဆိုရင် deepfreeze ရှိမှသုံးပါ အသုံးပြုပြီး စက်ကိုပြန်ပိတ်ခဲ့ပါ....။Browser ကိုသုံးပြီး
ရင် Tools>>Clear Recent History>>Time range to clear ကို Everthing ပြောင်းပြီး အမှန်ချစ် အကုန်ထည့်ပြီး clear now ကိုကလစ်ပြီး သင့်၏ခြေရာလက်ရာတွေကိုအကုန်ရှင်းခဲ့ပါ.......။
မှတ်ချက်။ ။တခြား hacking tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်....။အချိန်မရလိုဒီလောက်ပါပဲ..။ဒါဆိုရင်ကို
For Attacker :Keylogger လို Tools တွေသုံးပြီးလုပ် တာဆိုတာခပ်ညံ့ညံ့Attacker တွေလုပ် တာဖြစ်ပါတယ်...။အားမပေးချင်ပါဘူး....။သားကောင်းရဲ့ စက်မှာ Deepfreeze လိုဆော့ဝဲကောင်းတွေတင်
For user : အတွေ့ အကြုံ အပြင် ဗဟုသုတ အနည်းငယ်လိုသလို စာများများဖတ်ဖို့လိုပါတယ်.....။
အယုံသွင်းတာပါ.....။computer အတွေ့အကြုံ အခေါ်အဝေါ် အနည်းငယ်မျှသိရုံမျှဖြင့် လူတစ်ယောက်ကို အယုံသွင်းပြီ လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.....။လူဆိုတာ အင်မတန်ကို အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ပါ တယ်.....။ဥပမာဝါသနာတူ ။အကြိုက်တူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အေ၇ာ ၀င်ပြီး နှိက် သွားကြတာပါ...။လူဆိုတာ အယုံ လွယ်ဆုံး သတ္တ၀ါမဟုတ်လား........။Social Enginnering ကကျယ်ပြန့်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြောသလောက်
မက အများကြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်......။ကျွန်တော်တစ်ခါကြုံဘူးပါတယ်......။ ဈေးဝယ်တဲ့ ဆိုက်တစ်ခုထဲ ကျွန်တော်သွားတယ်ဗျာ(မမှတ်မိတေ်ာ့ပါဘူး)...အဲဒီမှာ ၀င်ကြည့်သူလူဦးရေ 10000 ပြည့်လိုဆိုပြီးဒေါ်လာ 10000 သင်ဆုရတယ်ဆိုပြီးပေါ်လာတာ......လူကိုဖလန်းဖလန်းထသွားတာပဲ.....။နောက်ပြီး paypal ဆိုက်ကိုညွန်ထားတယ်...။သင့် paypal အကောင့်ထဲကို လွဲပေးမယ်ပေါ့.။ကျွန်တော်ကအဲဒီအချိန်တုန်းက online စသုံးတတ်ခါစ ဈေးဝယ်တဲ့ ဆိုက်ထဲဝင်တာဆိုတာလဲ မိုဘိုင်းတွေ လိုက်ရှာကြည့်တာ.......။လားလား paypal ဆိုက်အတုကိုညွန်းထားတာဗျ.....။တော်သေးတာပေါ့ ကျွန်တော်ကဒီနိုင် ငံကဆိုတော့ paypal နှင့် ဘာမှ ဆိုင်ဘူးရယ်......အဲဒါကြောင့် ဟီး.....။လူ့လောဘာကိုအသုံးချပြီး အယုံသွင်းသွားတာလေ......။
ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကတော့ သင့် password ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပါ....။ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေး
မသုံးပါနဲ့.....။online ပေါ်မှာ ဘာမှမယုံပဲ သေခြာ ညဏ်သုံးတာအကောင်းသုံးပါပဲ လိုပြောရင်းးးးးးးး
ဒီစာကိုဖတ်တဲ့သူတိုင်း နုံ၊အ ခြင်းမှာကင်းနိုင်ကြပါစေလို့..........။
ဘီဂင်းနား Hacker လေးတွေလည်းအတွေအကြုံရပါစေလို့.......။
Labels: defence, gmail, tutorial |